Inona ny renivohitra bisikileta an-tendrombohitra amin'izao tontolo izao? - Bisikileta An-Tendrombohitra
Tena > Bisikileta An-Tendrombohitra > Filoha bisikileta an-tendrombohitra - ahoana no fomba hipetrahana
Filoha bisikileta an-tendrombohitra - ahoana no fomba hipetrahana
Inona ny renivohitra bisikileta an-tendrombohitra amin'izao tontolo izao?
Ireo manintona dia somary mahaliana. Ny highwheelers dia zavatra toa an'ity haitao manaitaitra ity, notohanan'ny zatovolahy tia fanatanjahan-tena, ary arakaraka ny haben'ny bisikileta no nahavitanao haingana kokoa. Misy tantaram-panatanjahan-tena izay nampifandraisina mivantana ireo pedal rehefa nanomboka nidina ambany tamin'ny kodiarana aloha izy ireo ary haingana ny kodiarana dia afaka mihodina, ny pedal dia afaka mihodina haingana ary rehefa midina izy ireo ary mandeha haingana dia sarotra ny mitazona azy. ny tongotrao any ary noho izany ny sasany amin'ireo tovolahy dia nandondona ny tongony teo amin'ny tadin-tànana ary afaka nitsambikina avy teo amin'ny bisikileta nisy fiantraikany izy ireo mba tsy ho voafandrika.
Ireo karazana bisikileta andehanantsika ankehitriny, zavatra toy izany rehefa ilay noforonina izay nanjary fantatra ho toy ny bisikileta fiarovana satria azo antoka kokoa. Talohan'ny namoronana bisikileta an-tendrombohitra dia nisy fiakaran'ny bisikileta tamin'ny fiandohan'ny taona 1970. Betsaka ny olona nanomboka nahita ny bisikileta ho toy ny fitaovam-pitaterana mety hitranga, indrindra fa ny fitomboan'ny ahiahy eo amin'ny tontolo iainana.
Nanadihady betsaka tamin'ireo mpitaingina bisikileta tany am-boalohany aho ary nitaingina be dia be tamin'izy ireo, izay tena zava-dehibe. Nianatra zavatra betsaka toy izany koa aho rehefa nitondra fiara tamin'izy ireo toy ny nataoko rehefa nipetraka niresaka tamin'izy ireo aho. Bike bisikileta araka ny tena ahalalantsika azy izao Nanomboka tao amin'ny County Marin, avaratry San Francisco.
Natomboky ny vondron'olona iray izay nanao traikefa nahafinaritra tamin'ny bisikileta ary ny nataon'izy ireo dia ny fitondrana bisikileta cruiser taloha WWII Schwinn taloha ary nitondra kamiaon-kamiaonety nankany an-tampon'ny tendrombohitra. Tamalpais ary avy eo dia mihazakazaka haingana araka izay azo atao amin'ny lalana maloto amin'ity tendrombohitra ity ary mihazakazaka amin'ny tany. Matetika dia tapaka ny ampahany rehefa mitaingina fiara, ka fantatr'izy ireo tsara fa ity karazana hub ity dia mety ho tapaka kokoa noho ity karazana hub hafa ity, ka samy hiezaka hanana ilay hub tsara isika rehetra.
Raha ny tena izy dia fizotrany miverimberina izay nahitan'izy ireo ny ampahany tsara indrindra napetraka tamin'ny bisikileta. Ny zavatra mahavariana amin'ity bisikileta ity dia ny dia nalehany be mba hilazana fa ny rafitra dia natsangana tao amin'ny Marin County fa avy eo nahazo ny lasely Brooks avy any UK izahay, nahazo ny derailleur avy any Suntour any Japon izahay, nahazo ny crankset TA avy any Frantsa. , manana poste seza avy any Italia izahay hamokarana ity bisikileta iray ity fotsiny. Nanomboka nanana fifanenjanana bebe kokoa tamin'ireo mpandeha an-tongotra sy mpitaingin-tsoavaly tany Marin ny bisikileta.
Ity farany dia nahatonga ny ankamaroan'ny lalana bisikileta an-tendrombohitra iray any Marin County nakatona, ary ny ankolafy hafa ao amin'ilay faritra dia nanamboatra lalamby manokana ka ny olona dia nanamboatra làlana mahavariana izay naorina tsara manodidina ny zavatra antsoina hoe onja- Mamorona traikefa. Ho an'ny bisikileta an-tendrombohitra efa niofana dia lasa tsipika iray ny lalana iray izay milaza aminao ny lalana tokony halehan'ny bisikileta. Ireo traikefa rehetra ireo dia nifampitohy avokoa; Fantatr'i Gary Fisher ireo Maty Misaotra satria nihaona tamin'izy ireo izy rehefa nandeha bisikileta tao amin'ny Tour Del Mar.
Sady hazakazaka bisikileta no natao ary fetin'ny rock folk. Ny tiako holazaina dia anio, impiry ianao no hiandrasana tarika toy izao? ny Grateful Dead milalao hazakazaka bisikileta? Tsy izany no karazana fifandraisana hataonao androany, fa amin'izao fotoana izao eto amin'ity toerana ity dia misy dikany satria ny bisikileta sy ny sehatry ny mozika dia heverina ho karazana zavamaniry toy ny hoe Misy manampy manamboatra an'izao tontolo izao izay tadiavinay be
Sarotra kokoa noho ny mihazakazaka ve ny bisikileta an-tendrombohitra?
Squamish, ny 'Fialamboly ivelanyRenivohitr'izao tontolo izao'mipetraka eo anelanelan'ny Whistler sy ny North Shore of Vancouver, BC. Izy io koa dia tranon'ny foiben'i Pinkbike.3. 2020.
Misy fifandrafiana eo aminay sy ny namantsika ao amin'ny GMBN. Amin'ny ankapobeny, hitanay fa tena mahay mitaingina bisikileta izy ireo. Ka mila mahatsapa ho tsara kely kokoa isika amin'ny fahalalana fa izay ataontsika dia sarotra kokoa ny Roadies dia mety kokoa, sa tsy izany? Azonao an-tsaina ve ny bisikileta an-tendrombohitra mandresy zavatra toa ny Tour de France.- Tena nisy i Cadel Evans tamin'ny 2011. (tsindrio fakan-tsary) - Eny, teboka maningana tsara izany.
Sa azonao an-tsaina ve raha misy mpitaingina làlana mipoitra amin'ny hazakazaka bisikileta an-tendrombohitra, dia horavan'izy ireo tanteraka izany. - Peter Sagan, vao nahavita ny hazakazaka bisikileta an-tendrombohitra olaimpika izy tamin'ny taona 35 lasa teo - saingy intelo no nasiany totohondry, Si. Avia eny, omeo fotoana izy - eny nanao tokoa izy, nanana kodiarana telo in-telo izy, avy eo nieritreritra izahay fa aleo manandrana mitsapa an'ity iray ity - fa toerana manao ahoana izany.
Eto amin'ny Dolomites tsara tarehy any amin'ny faritra Alta Badia. Nikasa mitaingina roa izahay, ary samy ampakarina ao amin'ny Wahoo ELEMNT. Manomboka eto amin'ny fiakarana ho any Passo Campolongo eo ivelan'ny Arabba isika ary manana cappuccino mahafinaritra. - Eny, Mazava ho azy.- Izao dia efa nanomana làlana 35 kilometatra aho.
Tsy lava loatra. Saingy miakatra ny fiakaran'ny Pordoian ary koa ny Fedaia, izay mifarana amin'ny farihy mahafinaritra.- Marina izany.
Tsy mitondra ny antsasaky ny recke St intsony aho izao. Fa handeha hamakivaky ity tendrombohitra ity aho. Mety tsy nifoha.
Toa tsy dia tia mandray vahiny izy io. Fa mazava ho azy fa manana fehikibo fiaviana amin'ny lafiny iray hafa aho. Ny fahasarotana dia tsy azo refesina kilometatra. - Fotoana angamba. - Ie. - Ka ny herin'ny fo sy ny fo no resahana rehetra, izay horefesintsika amin'ny metatra herinaratra2max ary koa ireo WICK TICKRs.
Inona no mafy kokoa? Any ivelany na inona izany na asfalta? Ary raha mbola eo aho, Si, mitaingina bisikileta an-tendrombohitra ianao ary manao Lycra. Inona izany? - Avela. Nahazo alalana manokana aho. - Azonao antoka ve izany? - Ie. (Vaky vaky) (mozika rock) - Mandrosoa, Si, tohizo! (Mozika rock) - Mety hanontany tena ianao izao hoe inona no ifandraisan'izany rehetra izany amin'ny GCN, ankoatry ny mety ho zon'ny fieboeboana.
Ny zava-misy dia mihetsika mifanakaiky indray ny arabe sy ny arabe. Ekena, ny ankamaroan'ny zavatra ataon'ireo bandy GMBN dia lavitra ny tara araka izay tratrany. Saingy aza hadino fa bisikileta hazakazaka maoderina maro miaraka amin'ny freins disc misy azy sy ny fahalalahana mihetsika ho an'ny kodiarana lehibe sy malalaka no lasa be mpampiasa kokoa.
Raha ny marina dia bisikileta bisikileta an-tendrombohitra maro no mampiasa kodiarana sy kodiarana bisikileta mahitsy, mba hanomezana fahafaha-manao tsara ny lalana. Nihevitra izahay fa tena te hahafantatra ny fomba? sarotra ny mamily ny lalana. Ekena fa hizaha toetra izany amin'ny bisikileta an-tendrombohitra 29er izahay.
Raha vao nahalala momba ny arabe vatobato any Paris-Roubaix izahay dia tsy dia misy mahasamihafa azy. Inona no azoko lazaina, tsapako fotsiny fa mandroso tsikelikely eto isika. Aleoko mahita hoe aiza i Matt. (mozika techno funky) - Ny zavatra mampihomehy milaza izany izay sarotra kokoa dia miankina amin'ny fiezahanao, inona no farafaharatsiny aiza amin'ny bisikilety eny an-dalana? Ny hatsaran-tarehy dia mitoetra amin'ny hoe afaka mandeha mora na sarotra araka izay tadiavinao ianao. (Pataloha) Fa aza manahy.
Fantatro fa ny voninahitry ny mpitaingina lalana no tandindomin-doza ka hiasa mafy aho. (Pants) (mozika techno funky) - Andro androko. Fiakarana henjana.
Somary mijoro fotsiny amin'ny bisikiletako. Manosika ahy hatrany amin'ny fetra io. Azonao atao ny mahita ny asehon'ny ELEMNT amiko fa mila miakatra any izay toa sarotra kokoa aho.
Raha milaza ny marina dia ho hitanao indray mipi-maso fa sarotra be izany. (Pataloha) Ireo jiro amin'ny sisiny ireo dia mifamatotra amin'ireo faritry ny heriko. Green no tokonam-baravarana.
Saingy any an-tsaha dia mila miakatra matetika aho ary mahita mavo ary mena mihitsy aza. Mazava ho azy fa mena amin'ny haavon'ny ranomasina izy io. Tsy amin'ny haavon'ny ranomasina izy io.
Eo amin'ny 2 409 metatra isika. (Pataloha) Ah. (Exhales) Resy. 100 metatra miala ny tampon'ny tampon'isa.
Tanan-tafondro vita amin'ny lanezy - Eny, efa ho amin'ny faran'ny fiakarana aho, fiakarana iray ihany. Azoko lazaina aminao fa manify kely ny rivotra eto izay olona toa ahy izay tsy zatra ny hahavony.
Raha mijery ny haavo 2,058 metatra teo aloha fotsiny aho dia mbola manana 160 metatra eo an-tampon'ny Pordoi. Efa ho eo aho. (mozika techno funky) (mifoka rivotra be) Eny ary, amin'ny fiakarana faharoa sy farany amin'ny andro, ny Passo Fedaia.
Ankehitriny tsy mbola nitaingenako ity ka tsy azoko antoka izay antenaina. Fa ny fantatro dia tokony ho 7 1/2 kilometatra ny halavany, 7% eo ho eo ny firongatra, izay sarotra ho an'ny rehetra. Hotehiriziko ao anaty manga fotsiny izany, ezaka tsara mifehy sy maharitra, andramo ny mankafy azy araka izay azo atao. (manentana) Tsy maintsy ho tsara tarehy izy io - (pataloha) Ah.
Ajanony mandritra ny iray minitra ny hamafiny. (Pataloha) Tsy mampino izany. Azontsika jerena ve izay alehantsika? Eny eny, oh eny! Izay no alehantsika. (Mozika Fandresena) (Wheels crunch) - Farany miakatra ao amin'ny Passo Fedaia.
Fotoana hisotroana kafe. (manainga) - Ankehitriny dia hiaiky aho fa amin'ny fiandohan'ny andro dia nihevitra aho fa satria tsy latsaky ny antsasaky ny halaviranay dia mety ho izaho no voalohany hiampita ny tsipika fahatongavana. Saingy indrisy fa hitako amin'ny lalako mivantana fa efa teo i Matt.
Amin'ny lafiny tsara, na izany aza, antenaina fa midika izany fa manana ny vintana izy. Saingy izao dia hisy ny olana amin'ny fanandramana ataonay manontolo satria afaka metatra vitsivitsy dia mety tsy hivezivezy intsony aho mandra-pahatongako any amin'ny tsipika fahatongavana. Noho izany dia tsy hahazo angona fampisehoana izahay.
Fa hiasa mafy ihany aho, satria na dia tsy dia be hozatra aza aho, izay ananako dia hijanona miaraka amiko mandritra ny androm-piainako ary ny fidinana fidinana mikitoantoana no tena zava-dehibe. Fantatro fa be bisikileta an-tendrombohitra izany. Tena afaka mahazo bisikileta mivezivezy eto ianao.
Fa ny fitsipika dia mitoetra ho tsy miova na dia amin'ny vatokely aza. Midika izany fa tena manintona anao ny hovitrovitra, ka izany no antony mahasalama kokoa ny mitondra fiara eny ivelan'ny arabe noho ny mitondra fiara. Arakaraka ny maha mafy ny lalana, no vao mainka miasa mafy. (Mozika Pyschedelic) - Si, saika mangatsiaka ny cappuccino anao. - Jereo fa somary reraka ianao, somary reraka. - Ie, henjana be izany. - Eny ary, andao tonga any amin'ny resaka.- Eny.- Andao hojerentsika izay angon-drakitra anananao.- Tsara izany.- Mahaliana ahy izay anananao any.- Eny ary, teny an-dàlana nandritra ny adiny roa mahery aho.
Ny heriko antonony dia 152 watt fotsiny, izay tsy dia kely loatra ho ahy an-taratasy. Niasa mafy kokoa aho raha nanao ny marina tanteraka. Araky ny voalazanao dia somary reraka aho.
Fa tsy maintsy miteny aho hoe: mitsiky be ny tavako. Nahafinaritra izany. - Toa nifalifaly ianao.
Ny statistiko dia mitovy amin'ny anao. Somary ambany ny fampisehoana. Fa raha mandroso lalindalina kokoa ianao, dia nanana sakana roa nihanihana hatrany aho.
Mazava ho azy fa samy miakatra eo. Nanomboka faritra efatra sy dimy nandritra ny 30 minitra avy aho. Avy eo mazava ho azy fa manana ny hanitra de koa aho - izay tena mahaliana, raha jerenao ireo sary ireo ny angon-drakitra an-tsarinao amin'ny fiakarana, dia ezaka milamina izany, sa tsy izany? Na dia ampitahanao amin'ny tokony nataoko aza aho dia manao ezaka miverimberina betsaka mihoatra ny torimaso.
Ka na dia tsy dia avo loatra aza ny zava-bitan'ny olona eo aorin'izany rehetra izany dia mila miasa mafy aho mba hitazomana ny tanjoko amin'ny lalana misavoana marina ary sahy milaza aho fa amin'ny alàlan'ny ranomandry vitsivitsy dia miasa mafy aho nefa mbola tsy mieritreritra fa ity hery ity dia mitantara ny zava-drehetra. Ny vatako ambony no mety maharary indrindra. Mangovitra be dia be no tokony hositrikaina. - Ie, fa amin'ny farany, Si, inona no sarotra kokoa? Tsy maintsy atosika eny ivelan'ny arabe mandritra ny kilometatra maro izy io.
Manana izany fanoherana mihodinkodina fanampiny izany ianao, ka tsy ho tonga haingana na lavitra. Saingy amin'ny lafiny fahasarotana isan'ora dia hiverina amin'ny teboka voalohany aho. Heveriko fa sarotra araka ny itiavanao azy. - Heveriko fa mety marina ny anao.
Heveriko fa sarotra araka ny itiavanao azy io, saingy milaza kosa aho fa ny tsy fivoahana amin'ny làlana dia fomba iray hafa hampiasana ny vatanao - te hanaiky an'izany aho - mieritreritra aho fa mila mandeha any amin'ny gym, Matt - Niresaka izahay ambony, fa ahoana ny hevitrao? Inona no sarotra kokoa? Offroad sa lalana? - Eny, mandraisa anjara amin'ireo fanehoan-kevitra etsy ambany. Alohan'ny hikatsoanao dia alao antoka fa manana famandrihana amin'ny GCN ianao. Haingana dia haingana.
Kitiho fotsiny izao tontolo izao. Ary raha mila atiny bebe kokoa ianao dia zahao ny fomba nahaizan'i Matt naka ny GMBN ry zalahy mba hampisehoana aminao ny fomba fandehanana bisikileta an-tendrombohitra eny fotsiny ao anatin'ny enim-bolana amin'ny asa aman-draharaha matihaninao - tsy nila nitantara izany tamin'izy ireo ianao. - Fanandramana izany, sa tsy izany? - Fandehanana eny an-dalana, ivelan'ny arabe. - Oh yeah.
Aiza no ahafahako mitaingina bisikileta any Filadelfia?
Ratra.Bisikileta an-tendrombohitradia tsy dia mafy loatra amin'ny vatana raha oharina amin'nymihazakazaka. Tsy azoko lazaina firy ny nandratra ny tenakomihazakazakaamin'ny tsy firaharahana ny fandaharam-potoanako ary mandeha lavitra, indraindray ara-bakiteny. Tsy hikodiadia ny kitrokely abisikileta an-tendrombohitra(raha tsy hoe sendra fianjerana hafahafa ianao), tsy misy shin spints na tadin-dokotra ahiana.
Tsy miaina anaty paradisa amin'ny bisikileta daholo isika rehetra, fa miaraka amin'ny fahalalàm-pahaizana kely dia afaka manatona farafahakeliny dingana iray hanakaiky ny lalana mitaingina sy milamina. Ka amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny drafitra làlana isika, ny fampiasana ny teknolojia ananantsika izao hahitana làlana vaovao tsara hitondrana fiara ary hanaraka azy ireo, koa raha vaovao amin'ny fanatanjahantena ianao ary manontany tena ny amin'ny fomba hiatrehana ireo lalana be olona. afaka mandositra. Mitady làlana vaovao fotsiny ianao hanatsarana ny zotra mahazatra.
Manantena aho fa hanampy ity lahatsoratra ity! Ka inona ny lalana tsara hivezivezena? Miankina kely amin'ny zavatra tianao manokana no tiako: tiako ny miakatra sy midina havoana, raha mbola tsy mideza loatra izy ireo, misaotra betsaka. Ny olon-kafa dia te-hitsangantsangana eny ambonin'ny foy na mitondra fiara haingana araka izay tratrany. Avelanay ho anao izao karazana drafitra làlana izao.
Na izany aza, ny zavatra iraisan'ny mpitaingina bisikileta rehetra dia ny fitiavana làlana milamina sy milamina ary mangina, saingy tokony: tsy mitondra any amin'izay alehanao ianao dia holazaiko indray fa misy vokany: aza mitondra any amin'izay alehanao. mitondra fiara any amin'izay alehanao! 'ding'I hitako betsaka eto amin'izay itoerako any UK. Heveriko fa mahafantatra làlana manan-danja amin'ny tanàn-dehibe sy ambanivohitra ny olona ary fantany izy ireo satria mitondra azy ireo. Ary avy amin'ny cocoon'ny fiaranao dia afaka mijery tsara tarehy izy ireo: toerana tsara tarehy, arabe malalaka tsara, fifamoivoizana haingana ary inona no tsy tiana! Eny, fifamoivoizana mandeha haingana hanombohana azy: ireo lalana ireo dia ratsy amin'ny bisikileta nefa matetika dia feno bisikilety izy ireo Roads to ride Ity no idiran'ny teknolojia, noho izany dia misy làlana natokana vitsivitsy hitadiavana fampiharana sy tranokala ampiasainay eto amin'ny GCN antsoina hoe 'Komoot' ary manana kinova maimaim-poana sy safidy premium ihany koa izy ireo.
Mora be izany. Ka eo amin'ny tranonkalanao aho izao. Tsindrio ny pejin'ny mpandahatra làlana.
Nomeko ny toerana niandohako, kafe iray fantatro, ary nametraka toeran-kafa izay fivarotana dite tena tsara aho, mividiana naoty ary Komoot no nanao ny ambiny izay fantatro tamin'ny traikefa fa arabe fidiko ireto. , ary i Komoot dia nahita azy ireo satria manana karazana algorithma manan-tsaina isan-karazany, angona azony ampidirina avy amin'ireo mpampiasa azy manokana, ary koa ireo zavatra antsoina hoe fanasongadinana tao izay navelan'ireo olona be fanahy ary nitarika ahy hanambatra zavatra lehibe ho an'ny bisikileta. Amin'ity tranga ity dia lalan-kely mamirapiratra avy any Portbury mankany Clevedon Ankehitriny araka ny ahitanao ity dia any ivelany, ankehitriny dia eo am-pitadiavana tadin-dokanga aho, koa amin'ity tranga ity dia hanampy fanasongadinana aho: Làlan'ny bisikileta mahafinaritra toa tsara ary aorian'ny fotoana fohy dia hitanao fa namorona fampisehoana loopana ara-bakiteny i Komoot. Ankehitriny dia misy safidy kely hafa eto mba hilalao miaraka amina karazana làlana tadiavinao. Ka dia nitaingina bisikileta aho, izay matetika ny lalana mangina indrindra any, koa manome ahy vatokely na lalana an-dalambe haingana kokoa, ny halehiben'ny làlako: amin'ity tranga ity, 44.1 kilometatra, dia milaza amiko hoe ohatrinona ny fiakarana ary aiza ny lalana alehany midina, amin'ity mombamomba ny haavo eto ambany ity ary manome fotoana tombanana ho ahy ary izany dia mifototra amin'ny fahatsapako fa mety aho, araka ny hitanao, izaho dia nanao ny tenako ho humwell, fanombatombanana malala-tanana amin'ny ahy manokana Nanapa-kevitra ny Fitness.
Misy fomba telo ahafahanao manaraka an'io làlana io: ny voalohany dia ny làlan'ny sekoly taloha, izay anoratanao tsara ireo torolàlana isan-tsokosoko, tsy ao anaty sombin-tsarintany iray aho avy eo mando sy mandoro tena azo antoka, maninona azo antoka fa tsy te-hanao izany intsony ianao. Fa kosa, azonao atao ny mampiasa ny findainao ho karazana fitaovana fitetezana. Ka i Komoot dia manana rindranasa ary rehefa tsindrio fotsiny ny diako dia manomboka ny fivezivezena aho, manodina ny torolàlana amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo rehefa te-hametraka ny findaiko ao am-paosiko aho na manana fahitana rehefa manana havoana aho, izay ahafahako mametaka ny telefaoniko amin'ny kitapoko Ny teknika fahatelo dia ny fampiasana solosaina bisikileta GPS toy izao Noho izany, Wahoo ity, ary raha ny tena izy dia azoko atao ny mampifandray azy amin'ny kaontiko Komoot, izay midika fa afaka manara-maso ny lalako Komoot amin'ny fikitikitry ny bokotra Raha te-hanao mikaroha bebe kokoa momba ny dianao kasainao alohan'ny handehananao, angamba satria mandeha any ianao, ka misy kely kokoa amin'izany, nanambola bebe kokoa ianao, avy eo dia atoroko ny Google fa ampiasaiko hatrany izany, betsaka amin'izany, ho an'ny fakana sary an-tsary, saingy tena ilaina tokoa izany raha tsy te hanana hevitra kely momba ny endrik'ilay lalana ianao, eny fa na dia ny lampivato ary koa ny fifamoivoizana satria azonao antoka tsara fa raha ny Google Street View Ny fiara dia miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana, mety ho izany koa ny bisikileta antitra, izany hoe a saina mena mazava ary mazava ho azy fa mora ampiasaina.
Mihevitra aho fa tsy mila manazava. Fa na inona na inona ego dia sintominao ho eny an-dalambe ilay olona volomboasary tianao hizahana amin'ity tranga ity, ireo arabe mamirapiratra avy any Portbury ka hatrany Clevedon ary miala tsiny amin'ny hevitra momba ny hafainganan'ny Internet. Brilliant Lane Portbury mankany Clevedon, tena tsara izany.
mety ve ny syrup maple ho anao
Farany, loharanom-pahalalana miandry fotsiny ny fanararaotana ny fahalalana eo an-toerana, na ny nomerika amin'ny media sosialy na ny bisikileta an-tsokosoko izay hitanao amin'ny zavatra niainako dia faly fotsiny miresaka momba ny làlana, bonus ve izany? mba hahafahanao manao izay tsara indrindra avy eo ary mizara ny toro-hevitrao ary matoky aho fa nanamboatra tambajotram-pifandraisana mahafinaritra ianao ary avy eo manamboatra tadivavarana namboarina. Tena io no tianao sy toerana itahirizanao ny fotoana laninao amin'ny lalana be olona farafahakeliny. Antenaina fa nahasoa ity lahatsoratra ity.
Mba omeo ankihibe kely azafady raha nankafizinao izany ary miambina tsara sy mankafy mitondra fiara. Làlana vaovao tsara tarehy io
Fialamboly lafo vidy ve ny bisikileta an-tendrombohitra?
9 natiora-mavesatrabisikiletalalana mankanyPhilly. Ireo lalana miaraka amin'ny habaka maintso indrindra.
John Heinz National Wildlife Refuge ao Tinicum. Handika ny rohy.
Làlana Cobbs Creek. Handika ny rohy.
Mile an'i Bartram. Handika ny rohy.
Grey Ferry Crescent Trail Park. Handika ny rohy.
WissahickonBisikiletaLàlana. Handika ny rohy.
Kelly Drive / Lozika atsinanana. Handika ny rohy.
FDR Park. Handika ny rohy.
Mijery anao. Kitapo fako tsy misy dikany ianao miraikitra amin'ny fiafarana tsy misy na inona na inona eo amin'ny fiainana hahasambatra anao. Na ny vorona aza mieritreritra fa resy ianao. (Maneno ny vorona) Fotoana fiovana izao.
Mivoaka any ivelany. Mahita an'ireto ankizy ireto ve ianao? Izy ireo dia manana fotoana tsara indrindra amin'ny fiainany amin'ny bisikiletany. Fantatr'izy ireo izay mitranga.
Tsy hanana fahafinaretana toy ny ataon'ireto ankizy ireto mihitsy ianao. Raha tsy mividy bisikileta an-tendrombohitra ianao. Mandehana any amin'ny magazay ary henoy ny ankizilahy tsy mahalala izay lazainy.
Miezaha mivarotra bisikileta ho anao. Makà bisikileta ary vidio. Miomàna ary mameleza ny làlanao eo an-toerana.
Fotoana handehanana amin'ny bisikileta vaovao misy anao. (Paosy bisikileta) (mimenomenona) Fantaro fa tsy ny bisikileta sy ny fivarotana bisikileta rehetra akory no foronina mitovy. Andramo indray mandeha.
Amin'ity indray mitoraka ity dia manao ny fikarohana. Mitsidika fivarotana bisikileta ary miresaka amin'ny mpiasa. Fantatrao ny bisikileta.
Mividy bisikileta faharoa, makà hafainganam-pandeha hafa. Amin'ity indray mitoraka ity ny bisikiletanao dia tsy hihorona roa. Manorena fiakarana amin'ny fiakarana sy fahatokisana amin'ny fidinana.
Mitaingina izay azonao atao ary aza manasongadina izay tsy vitanao. Ho mora kokoa izany. Hahatsiaro ho salama kokoa ianao, tsia Mandra-pahatsapanao fa tsy misy olon-kafa mitondra fiara manao t-shirt sy khaki short.
Fotoana hiakanjo. Ka novonoina. (mozika hop hop hop bass) Manomboha mampiasa teny marary toa ny shred sy gnar.
Mandehana mitondra fiara hatrany, avelao ny tenanao ho tratry ny fiakarana sy ny fidinana. Ny faniriana ho tsara kokoa dia maniry ao aminao. Aza variana amin'ny bisikiletanao.
Miorena amin'ny specs, zoro loha, ary zavatra hafahafa toy ny hamafin'ny kodiarana. Fantaro avy eo fa mila asa faharoa ianao hanohanana ny fiankinan-doha. (manala ny tendany) Midika izany, firehetam-po? (Lawnmower hums) Mividiana bisikileta fanintelony.
Ity dia manana fiasa bebe kokoa, dampers bebe kokoa ary miakatra sy midina ny paositra. - mahafatifaty. - Tsy ny fakany fotsiny no mitondra azy fa mandefa latsaka ary mianatra fika.
Tsara. Mihoatra ny fialamboly fotsiny izao. Fomba fiaina io.
Indray andro dia ilazanao ny mpiara-miasa aminao ny drive rehetra nataonao sy ny fahasarotanao amin'ny fanapotehana. Tsy mihaino izy ireo. Tsara izany.
Jess no anarany ary mitondra fiara koa izy. Manontany izy hoe: 'Te-handeha mitaingina ve ianao indraindray? ”Ary hoy ianao hoe,“ Shit yeah! ”Hay tsara i Jess. Toy ny, rea lly tsara.
Mampianatra anao amin'ny làlana ambony sy midina izy. Tsy afaka hidina akory izay alehany. Azonao atao ny mampidina azy nefa reraka ianao.
Niandry 30 minitra izy nefa nilaza fa nahafinaritra be izany. Nilaza izy fa tokony hataonao indray mandeha izany. Manaiky ianao na dia nanorotoro anao aza izy.
Saingy tsy mampaninona anao izany mandra-pahatongan'io andro io. (Whine) (mozika hip hop bass bass) Manomboka mitondra fiara isan'andro aorian'ny andro fiasana. Mitadiava vondrona eo an-toerana ary mitondra fiara miaraka amin'ireo mpamily izay hanampy anao hanatsara ny lalao.
Ho tonga mpamily tsaratsara kokoa amin'ny fiezahana fotsiny hanaraka. (mozika mavesatra, mozika hip) mahamarika bisikileta hafa toa ity bisikileta midina sy bisikileta miampita ity. Mety hahafinaritra ny bisikileta amin'ny lalana.
Mipetraha amin'ny jumper maloto ary tadiavo ny fitsambikinana vitsivitsy hampihatra ny tetikao. Toa mafy kokoa noho ny nieritreretanao azy ity. Tena avo izy, mampidi-doza be izany.
Tsia. Mandehana misimisy kokoa, miakatra ambony, mitsambikina lavitra, ary mandehana haingana kokoa noho ny noeritreretinao hatao. Karakarao ny bisikiletanao ary hatsarao.
tombony azo avy amin'ny sakamalao
Mividy fitaovana, mividy ampahany, mividy fitaovana bebe kokoa hametrahana ireo singa. Mandany ora maro hanapahana hevitra amin'ny bisikileta manaraka. Jereo ny bisikileta nofinofisinao sy ny karbônao.
Hihombo ny fiankinan-doha ataonao. Handany fotoana bebe kokoa hiasana ianao ary handany fotoana bebe kokoa hijerena bisikileta. Mitaingina làlana bebe kokoa, manety bozaka bebe kokoa.
Làlana maro kokoa, bozaka bebe kokoa. Làlana, bozaka. Vidio ny bisikileta nofinofisinao.
Mitondrà namana vitsivitsy ary mitaingena lavitra kokoa noho ny teo aloha. Avelao handeha ny bisikiletanao Raiso amin'ny toerana izay tsy fantatry ny ankamaroany akory. Mandehana daty hafa.
Amin'ity indray mandeha ity ianao dia afaka maharaka hatrany. Tsy misy fialan-tsiny, tsy misy fialan-tsiny. Tsara kokoa izany.
Amin'ity indray mitoraka ity dia mandresy anao amin'ny dimy minitra fotsiny izy, samy faly ianao, dimy ambony, tsy azony inoana hoe tsara lavitra no azonao. Salama sakaiza, indray andro any dia hahita fampitam-baovao amin'ny bisikileta vaovao ianao. Toy ny anao io, fa maivana kokoa ny 15%, henjana 35% ary mena.
Izy io koa dia mandany turf be lavitra noho ny bisikileta novidinao. Mandehana bisikileta mba hahavitana azy. Tsarovy ny tsara lavitra azonao sy ny fahafinaretana entin'ny fiara amin'ny fiainanao.
Tsy momba ny bisikilety alehanao izany fa ny mitaingina ny bisikiletanao no entinao. (Air hisses) Eny, mety tsy ity dia ity. ('Nahazo ilay ranom-boankazo aho' avy amin'ny Dream Junkies) ♪ Reny malala, hitia anao ity ♪♪ Nahazo diplaoma tamin'ny mpikomy ka hatramin'ny revolisionera Tao amin'ny faritra misy ahy dia tian'izy ireo izany ‡ Mihaino ahy ny lafiny rehetra ☆ Look Jereo ny fanahiko ♪ ♪ Jereo ny foko ♪♪ Jerevo ny fanantenako ♪♪ Ataovy ao an-damosiko izao tontolo izao ♪♪ Fa mbola entiko ihany ♪♪ Lazao amin'izy ireo fa manana ny tanako Andriamanitra ♪ ♪ Tsy avelako izy io ♪♪ III dia avy amin'ny sisin'ny ranomasina ♪♪ Milomano amin'ny tsara indrindra tsy azoko lavina fa voafidy aho Eny, Miggity-Mack Milking the microphone ♪♪ Tsy mieritreritra aho Haveriko io
Mampidi-doza toy inona ny bisikileta an-tendrombohitra?
Bisikileta an-tendrombohitradia fomba fanatanjahan-tena tsara rehefa mivoaka any ivelany hankafy ny fahitana nefa tsy misy risika izany. iraisanabisikileta an-tendrombohitrany ratra dia misy mangana, fikikisana, taolana vozon'akanjo ary ratra amin'ny hatoka, hoy i Stuart Willick, MD, mpitsabo amin'ny fanatanjahan-tena. Maratra mafy kokoa koa no mety hitranga.iraika amby roapolo . 2016.
Sarotra ve ny bisikileta an-tendrombohitra?
Bisikileta an-tendrombohitrany dian-tongotra matetika dia misy fiakarana maranitra sy mideza, fa ny lalana mazàna dia mifikitra amin'ny naoty maivana sy mifanaraka kokoa. Na izany aza, ny lalana dia mety manana naoty mideza sy fivadibadika haingana, toy nybisikileta an-tendrombohitramety ho fisaka ny lalana. Ny mitaingina lalana eny an-tendrombohitra dia azo antoka kokoasarotranoho ny aMTBmitaingina làlam-by.19. 2016.
Mandoro kaloria betsaka noho ny mandeha ve ny bisikileta an-tendrombohitra?
Amin'ny ankapobeny,mitaingina bisikiletaefa hita tamin'ihandoroianareokaloria bebe kokoa. Eo ho eo,nyLehilahy 180 kilaomitaingina bisikiletaamin'ny 5,5 kilaometatra / oramaymanodidina ny 320kaloria. Etsy ankilany, ilay olona ihanyafaka mandorotokony ho 305 tany ho anykaloriarahovianaMANDEHAamin'ny 3,5 kilaometatra / ora.
Mahery vaika ny bisikileta an-tendrombohitra?
TENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRAvoajanahary ny bikikngHIITfomba fiasa amin'ny fomba fanao raha ny olona mitaingina syle / aleony ary ny fialana amin'ny fanatanjahan-tena dia afaka manao azy bebe kokoa na latsaka.
Milamina ve ny bisikileta any Filadelfia?
Ireo mpitaingina bisikileta dia tsy maintsymitainginaAzo vinavinaina, izay misy ny fiviliana famantarana, ny mitaingina ny fivezivezin'ny fifamoivoizana ary ny fijanonana amin'ny jiro mena ary ny fijanonana.Filadelfiany lalàna dia mitaky bisikileta latsaky ny 12 taona tokony hanao aroloha rehefa mitaingina, na dia amporisihina mafy ho an'ny mpitaingina rehetra aza ny fiarovan-doha.1. 2020.
Azo antoka ve ny mitaingina bisikileta any Filadelfia?
bisikiletadia fiara mandeha amin'ny lalàna, izay midika fa manan-jo hahatsapa ianaoMAMPIDI-DOZAeny an-dàlana. Raha misy arabe iray misy fijanonana amin'ny lafiny roa,mitainginaeo afovoan'ny arabe diaOkay. Atombohy amin'ny bufferedbisikiletany làlambe avy eo miasa tsikelikely hatramin'ny arabe hafa.